Izimbangela zoshukela omncane wegazi, izimpawu nokwelashwa kwe-hypoglycemia > Okunye
Izimbangela zoshukela omncane wegazi, izimpawu nokwelashwa kwe-hypoglycemia
Ushukela omncane wegazi uholela ekuphulweni kwepharamitha ebalulekile yempilo - ukuqina kwendawo yangaphakathi yomzimba. Ezincwadini zezokwelapha, lesi simo sikhonjiswa yigama elithi hypoglycemia, elihumusha ngokweqiniso kusuka olimini lwesiLatin ngokuthi "ushukela wegazi ophansi."
Iningi labantu liyaqonda ukuthi kungani ushukela ophezulu wegazi ulimaza. Isizathu salokhu ukwanda okuphezulu kwesifo sikashukela - abantu abaningi bayasazi lesi sifo. Kepha bambalwa abantu abazi ukuthi i-hypoglycemia ingathwala ingozi enkulu empilweni.
Kungani umzimba udinga ushukela
I-glucose ingenye yezakhi ezibaluleke kakhulu. Ngenxa yalokhu i-monosaccharide, iningi lamaseli omzimba lenza ukuphefumula kwamangqamuzana, lapho iseli, njenge-reactor yenuzi, lizinikela ngamandla.
Ingqondo iyisitho esizwela kakhulu sokwehlisa ushukela, ngoba ama-neurons adinga amandla amaningi we-substrate (ATP) ngomsebenzi wawo futhi akakwazi ukuwuhlanganisa kwezinye izakhi zomzimba. Lokhu kungenxa yokuthi ama-molecule amakhulu awakwazi ukudlula emshinini okhethekile wokuvikela ubuchopho - isithiyo sobuchopho segazi - bese engena kwi-neuron.
Amanye amaseli womzimba azwelani kakhulu nge-hypoglycemia. Ngaphezu kwalokho, abahlupheki kakhulu uma bekhiqiza amandla kweminye imithombo. Kepha uma kungekho glucose, angakwazi “ukuphefumula” ngokushesha nje nezinye izakhi, ngoba eminye imithombo ikhiqiza amandla amancane.
I-Hypoglycemia ithathwa njengesimo lapho ushukela wegazi wehla ngaphansi kwe-3.0 mmol / L, futhi ukuncipha kwayo okubukhali kungadala i-hypoglycemic coma ngisho noshukela wegazi ongu-2,5 mmol. Iqiniso lokuthi ukwehla kwayunithi elingu-1 kungaba yingozi empilweni kunokukhuphula ushukela ngama-20-30 amayunithi, futhi nengozi yangempela yalesi simo ifihliwe.
Ngokuvamile, zibangelwa imithamo enganele yemithi enciphisa ushukela ekwelapheni isifo sikashukela sezinhlobo zokuqala nesesibili. Izimo ezinjalo zibangelwa hhayi kuphela ukubalwa okungalungile komthamo wezidakamizwa, kodwa futhi iqiniso lokuthi imithamo "efanele" ingahle ibe yiphutha ngaphansi kwethonya lezici ezimbalwa zangaphandle nezangaphakathi. Izibonelo zezimo ezinje zimi ngokulandelayo.
Amaphutha ekubaleni umthamo we-insulin. I-insulin yi-hormone enamandla kakhulu ekhiqizwa emzimbeni womuntu ngamanyikwe. Ukushoda kwaso ngenxa yokubhujiswa kwamaseli e-pancreatic beta kuholela ekukhuleni kukashukela wohlobo 1. Ngakho-ke, i-hormone engasebenzi kahle ithathelwa indawo nge-analogue yokwenziwa efakiwe. Kepha lapho ukhetha umthamo, iziguli zivame ukwenza amaphutha, futhi umthamo omkhulu kakhulu ungaholela ekwehlekeni kwamazinga kashukela egazini ngaphansi kokujwayelekile.
Ukwephulwa kokudla. Njengoba unesifo sikashukela, kubalulekile ukuthi udle ngendlela esezingeni elifanele futhi elilinganayo. Kwenzeka ukuthi isiguli ngemuva kokuthatha i-insulin sikhohlwe ukudla. Ngesenzo sawo, i-insulin ishayela nge-glucose kudepho, futhi glucose omusha awutholakalanga ngenxa yokuntuleka kokudla. Kulokhu, emizuzwini embalwa nje, kuvela izimpawu zoshukela begazi abaphansi.
Ukwanda kokuzivocavoca komzimba. Noma umthamo owanele we-insulin, i-hypoglycemia inokwenzeka ngokumelene nesizinda sokuzivocavoca ngokweqile ngokweqile komzimba, ngoba umzimba udla ushukela omningi kunalokho obekubaliwe.
Ukwehluleka kwezinso noma kwesibindi. Lezi zimo futhi zidinga ukwehla komthamo we-insulin, ngoba ziguqula imetabolism yezinto, kufaka ne-glucose ne-insulin uqobo.
Izifo ezikhulu kanye nengcindezi. Enye indlela yokusabela okunganele emithini eyehlisa ushukela ushintsho ekuzwelweni kwama-receptors amaselula kuyo ngokumelene nesizinda sesifo noma sokuxineka. Izifo ezibangelwa amagciwane, izifo zamathumbu, inyumoniya, noma ukukhathazeka okukhulu kukhulisa isidingo somzimba, ngenxa yalokho umthamo ojwayelekile we-insulin ube mkhulu kakhulu, obangela i-hypoglycemia. Ngakho-ke, kufanelekile ukulungisa ithamo ngesiqephu ngasinye sokugula kakhulu.
Amaphilisi okwehlisa ushukela. Abantu abane-Type 2 sikashukela mellitus bathatha amaphilisi okwehlisa ushukela. Ukugxilisa kakhulu izinto ezinjalo kungaholela ku-hypoglycemia.
Baqhamuka nemvelaphi yokugula noma indlela yokuphila engajwayelekile yomuntu ongakaze ahlaselwe yisifo sikashukela. Izibonelo zezimo ezinjalo zibhalwe ngezansi.
Tumor (insulinoma). I-pancreatic tumor ekhiqiza i-insulin. Imvamisa kuyalingana. Kwenzeka njalo esikhathini esiningi. Ngokwemvelo, kuvela kumaseli we-beta we-pancreas, ngenxa yalokho yi-adenoma - isimila se-glandular. Kulokhu, i-pancreas ikhiqiza i-insulin enkulu ngokungalawuleki, okubangela i-hypoglycemia engapheli. Le oncology ibolekeka kahle ekuhlinzweni kokuhlinzwa, okukuvumela ukuthi uqede isimila kube kanye. Kodwa kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngemuva kokususwa kwenani elikhulu le-neoplasm, ukwelashwa kokugcina kwe-insulin okwedlule kuyadingeka, ngoba amangqamuzana asele akwanele ukuhlanganisa inani elanele le-hormone.
Ukudla okungenampilo. Ukudla okunganele ngesikhathi sokuzila kuholela ekwehleni koshukela wegazi. Kuyaqapheleka ukuthi lesi simo asikhuli ngokushesha okukhulu - kungakapheli izinyanga ezinhlanu kuya kweziyisithupha zokuncipha kokudla okunempilo noma amasonto amathathu ngemuva kokwenqaba ngokuphelele kokudla. Ukubuyiswa okunjalo isikhathi eside kungenxa yokuthi isibindi sine-depot enkulu ye-glucose precursor - i-glycogen, lapho ezimeni ezicindezelayo iguqulwa ibe ushukela oludingekayo emzimbeni. I-Hypoglycemia ingenzeka ngisho nokudla okwanele, kepha okungalinganiseli ukudla, lapho kunamakharbhu ambalwa kakhulu ekudleni.
Ukucindezela ngokweqile. Ngesikhathi sokuzikhandla, umzimba udla ushukela kakhudlwana kaningi kunesimo esijwayelekile, okungaholela ekwehlekeni koshukela wegazi. Leli qembu kufanele futhi lifake ingcindezi engqondweni. Ngokudabukisayo, ukufunda okuqhubekayo, ukubala, noma ukudala amaphrojekthi kungaholela ku-hypoglycemia.
Isikhathi sokukhulelwa. Ushukela omncane wegazi kwabesifazane kungenzeka ngenxa yokukhulelwa.
Imithamo emikhulu yotshwala. Ukuphuza utshwala kukhulisa kuphela i-glucose isikhathi esifushane, ngemuva kwalokho kunciphisa kakhulu. Ngakho-ke, abantu abane-alcohol engalapheki bathola izimpawu ze-hypoglycemia.
I-Hypoglycemia ne-hypoglycemic coma yizigaba ezihlukene zesimo esifanayo. Ngasikhathi sinye, i-hypoglycemia ngokungenakuphinda iholele ekhefini uma amazinga eglucose engalungiswa ngesikhathi.
Izimpawu zokuqala ze-hypoglycemia yilezi:
ukuqonda okunganele kwebanga / isikhathi,
ulaka olungashiwongo kanye nokungaphatheki kahle,
Izimpawu zesikhashana ze-glycemia ephansi zifaka:
ukuthuthumela okuncane (kokuqhaqhazela) kwemilenze,
Izimpawu ezingenhla ngeke empeleni zihambe ngokulandelana, zigcwalisane. Ngokuncipha okubukhali kwe-glucose, konke kwenzeka ngejubane lombani - kungathatha imizuzu embalwa ukusuka esimweni esanelisayo kuya ekuqaleni kokhilimu. Lesi yisimo esibucayi lapho umuntu engaphenduli ekuthonyweni kwangaphandle. Kepha uma uqhathanisa namanye amahlaya, kuyathandeka ngokwengeziwe futhi kufanelekile ekwelashweni okwanele.
Izingane zizwela kakhulu ukuguquguquka kweshukela. Izimpawu zabo ze-hypoglycemia zidalulwa kakhulu futhi zikhula ngokushesha kakhulu kunabantu abadala. I-Hypoglycemia ingenzeka ngisho nasenganeni ezelwe ngumama onesifo sikashukela. Lokhu kungenxa yokuthi emzimbeni womama isibeletho sisezimweni ze-hyperglycemia engapheli. Amanyikwe yingane iqala ukukhiqiza i-insulin eningi kakhulu ukunxephezela. Masinyane nje ngemuva kokuzalwa, umphumela wegazi lowesifazane uyanyamalala, bese kuthi i-insulin yayo iqhubeke. Ngalesi sikhathi, ukugxila okuphezulu kwehomoni ye-hypoglycemic kungaholela enganeni kwi-hypoglycemia futhi kuze kufike ekhefini. Ngakho-ke, esikhathini sokubeletha, izingane ezinjalo zidinga ukunakwa okuseduze kodokotela.
Izindlela ezilandelayo zikuvumela ukuthi wenze ukuxilongwa okulungile futhi uthole izimbangela ze-hypoglycemia.
Ukuthatha umlando. Le ndlela ikuvumela ukuthi unqume ama-provocateurs we-hypoglycemia. Kwabanesifo sikashukela, kufanelekile ukuphinda kuhlolwe igazi futhi kulungiswe nethamo lemithi enciphisa ushukela. Njengoba sifunde esigulini nasezihlotsheni zakhe, ngemuva kwalokho kwenzeka lesi siqephu, kungenzeka ukubona izimbangela ezifana nokungondleki, ukucindezela ngokweqile. Ngaphandle kwezizathu ezisobala, kufanelekile ukubheka isimo sezinto eziphilayo ngokwenzekayo (isimila) nokwenza ucwaningo olwengeziwe.
Ukuxilongwa kwelabhorethri. Ukuhlolwa kwegazi ushukela kuzokuvumela ukuthi unqume ngokunembile inani le-glucose ngesikhathi sokufunda. Umuntu ngamunye onesifo sikashukela une-glucometer yakhe ngayinye, ongayihlola ngayo nsuku zonke inkambo ye-glycemia nangemizuzu embalwa ukwenza ukuhlolwa kwegazi nge-glucose. Idivaysi enjalo ilula futhi kulula ukuyisebenzisa. Izinkomba ezinemba kakhulu ze-glycemia zinganqunywa kuphela elabhorethri lapho kuhlaziywa i-plasma yegazi.
Ucwaningo lwe-G-peptides. Le ndlela ilungele ukutholakala ngokunembile kwe-hypoglycemia futhi isetshenziswa kabanzi ngomuthi wanamuhla. Ucwaningo luhlukanisa uhlobo lwe-iatrogenic lwe-hypoglycemia kweqiniso. IG-peptide ingumkhiqizo owenziwe nge-insulin synthesis. Ngokuthuthuka kwesimila ngokumelene nesizinda sokukhula kwamahomoni, ukwakheka kwaleli peptide kuzokhula futhi, okunganqunywa kusetshenziswa ukuhlaziya kwelabhoratri. Ngenkathi ngethamo elikhulu kakhulu le-insulin liphathisiwe, i-hormone yalo uqobo iyanqenqeka ukukhiqizwa, ngakho-ke, i-Gepteptide ye-G nayo iyancipha.
Izindlela zokubona. I-Magnetic resonance imaging noma i-spiral computed tomography izonquma noma iphikise ubukhona be-neoplasms futhi yenze kube yindawo okwenziwa kuyo ukuhlinzwa okwalandela. Ngaphezu kwalokho, i-neoplasm biopsy ingenziwa ngezifundo ezalandela ze-cytological kanye ne-histological.
Ungamsiza kanjani isiguli
Kungakhathalekile ukuthi yini oyimbangela ye-hypoglycemia, usizo lokuqala esigulini kufanele luhlose ukukhulisa ushukela wegazi. Izincwadi zesimanjemanje zomuthi ophuthumayo zithi akufanele futhi uzame ukubheka ukuthi i-coma ibangelwa i-hypoglycemia noma i-hyperglycemia - udinga nje ukukhulisa ushukela. Lokhu kungenxa yokuthi i-hypoglycemia isongela impilo futhi idinga ukulungiswa ngokushesha, ngokungafani ne-hyperglycemia.
Ezimweni zasekhaya noma zomgwaqo, ngisho nabantu abangenalwazi bangasindisa impilo yomuntu esimweni se-hypoglycemic. Lokhu, uma umuntu esazi, kufanelekile ukumnika okuthile okumnandi:
Uma umuntu esesazi, udinga ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini okuphathelene nemithetho emisiwe emikhiqizweni - ngendlela yokungezwani nezinyosi noma amaswidi. Ngempela, kulesi simo, i-hypersensitive organism ingaphendula i-allergen nge-anaphylactic shock.
Ekhaya, ungashisa ngokushesha ingilazi lamanzi emazingeni okushisa afudumele bese uqeda izipuni ezintathu zikashukela kuyo. Isiraphu enoshukela enjalo kufanele inikezwe isiguli ukuthi siphuze nge-tube - isisombululo singena ngokushesha emathunjini amancane, futhi ukusuka lapho singene egazini. Amakhambi anjengalawa njenge-rosehip infusion ne-bran awalungele isiqephu se-hypoglycemia, ngoba kuneglucose encane kuwo. Kungcono ukunika isiguli ushukela.
I-Hypoglycemic coma iphathwa endaweni yokunakekelwa enkulu, njengoba esigabeni esibulalayo kuboshwa ukuphefumula kanye ne-palpitations, edinga ukuvuselelwa kabusha. Ukhuphula ushukela wegazi ophansi, odokotela baphatha izixazululo ze-glucose ne-glucagon ngaphakathi futhi bayikhansela ngokuphelele i-insulin.
Ukwelashwa ngokuhlinzwa kwe-insulinoma kwenziwa ngezindlela ezivaliwe noma ezivulekile. Indlela ye-laparoscopic (evaliwe) inemiphumela emihle, isikhathi esifushane sokusebenza kanye nezinkinga ezimbalwa. Kepha ukusetshenziswa kwayo kunqunyelwe. Ngakho-ke, odokotela bavame ukusebenzisa indlela evulekile yokuhlinzwa. I-insulinoma akuvamile ukuba ibe nemvelo emibi, ngakho-ke, i-chemotherapy yenziwa kuphela ezimweni ngazinye.
Ukuvimbela iziqephu ze-hypoglycemia kuma-diabetesics kuhloswe ukukhetha umthamo ofanele womuthi we-hypoglycemic. Ngaphezu kwalokho, umuntu ngamunye othatha lezi zidakamizwa kufanele aqonde ukuthi izinguquko ekudleni, ekusebenzeni ngokomzimba noma isifo segciwane zingadala i-hypoglycemia. Kulezi zimo, kufanele uthintane nodokotela wakho ukuthola izeluleko ngokushesha. Isifo sikashukela kufanele sinamathele kwimenyu eqinile futhi sincoma indlela yokuphila ukuze bangashintshi umthamo womuthi. I-glucometer ne-glucagon yomjovo kumele uphathwe njalo.
I-Hypoglycemia ngokumelene nesizinda sokudla okungalinganiseli noma imithwalo ngokweqile kudinga ukulungiswa kwendlela yokuphila. Ngemuva kokunciphisa umthwalo nokudla ukudla okulinganiselayo, izimpawu ze-hypoglycemia ziyanyamalala futhi azidingi ukulungiswa kwezokwelapha. I-Hypoglycemia kwizidakwa ezingalapheki ilungiswa ngokwenqaba utshwala futhi iqale impilo enempilo.
Abantu abane-predisposition ye-hypoglycemia kufanele bagweme ingcindezi nengcindezi, badle ngokuphelele futhi balinganise. Ukudla kufanele kube nazo zonke izinto ezidingekayo: amaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate, amavithamini nezinto zomkhondo. Ukudla kufanele kuphindwe (amahlandla amane kuya kwayisithupha ngosuku), ngezingxenye ezincane.
Ungabukeli phansi ushukela wegazi ophansi. Kuyingozi hhayi empilweni kuphela, kepha nangempilo. Noma kwenzeka isiqephu esisodwa, kufanele uthintane nodokotela.